Akụkọ - Etu esi edozi nsogbu EMI na imewe PCB Multilayer?
You ma ka esi edozi EMI nsogbu mgbe ị na-eme ọtụtụ ihe PCB?
Ka m gwa gị!
E nwere ọtụtụ ụzọ isi edozi nsogbu EMI. Ezọ nnabata EMI nke oge a gụnyere: iji mkpuchi mkpofu EMI, họrọ akụkụ Mgbuzu EMI na ụdị ịme anwansị EMI. Dabere na okirikiri nhọrọ ukwuu nke PCB, akwụkwọ a na-atụle ọrụ nke oghere PCB n'ịchịkwa radieshon EMI na njiri mara PCB.
Enwere ike ịbawanye ngwa ngwa elele mpịakọta elepụta nke IC site na itinye ike kwesịrị ekwesị n'akụkụ ntụtụ ike nke IC. Ma, nke a abụghị njedebe nke nsogbu ahụ. N'ihi nzaghachi opekata mpe elele nke capacitor, ọ gaghị ekwe omume maka ike ịgbanye ike harmonic iji chụpụ nsonaazụ IC na-akpachapụrụ anya na bandwidly zuru ezu. Na mgbakwunye, voltaji dị obere guzobere na bọs eletrik ga-eme ka ọdịda voltaji na nsọtụ abụọ nke omume nke ịchọ mma ahụ. Tlọ ọrụ ndị a dị ogologo oge bụ isi ihe ndị metụtara mgbanwe ọnọdụ EMI. Kedụ ka anyị ga - esi gboo nsogbu ndị a?
N'ihe banyere IC na bọọdụ sekit anyị, enwere ike iwere ike dị gburugburu IC dị ka ezigbo ikike ikike ikuku nke nwere ike ịnakọta ike site na diski ike nke na-enye ike ọkụ ugboro ugboro maka mmịpụta dị ọcha. Na mgbakwunye, nnabata nke ezigbo ike oyi akwa dị obere, yabụ akara mgbapụta izizi emepụtara site na inductor dịkwa obere, si otú a na-ebelata EMI mode.
N’ezie, njikọ dị n’etiti ike ọkọnọ na pin a na-enye ike IC ga-adị obere ka o kwere omume, n’ihi na mgbago elu nke akara dijitalụ na-agbakarị ọsọ ọsọ. Ọ ka mma ijikọ ya ozugbo na mpe mpe akwa ebe akara ike IC dị, nke kwesịrị ka a tụlee ya iche.
Iji chịkwaa EMI ọnọdụ a na-ahụkarị, okpokoro nke ike ahụ ga-abụrịrị ezigbo nhazi nke ike iji nyere aka ịkwado ma nwekwaa mmebe ahụ zuru oke. Peoplefọdụ ndị nwere ike jụọ, kedu ka ọ dị mma? Azịza ya dabere na ọkwa nke ike, ihe dị n'etiti akwa ahụ, yana ugboro ole a na-arụ ọrụ (ya bụ, ọrụ nke oge ịrị elu IC). Ke ofụri ofụri, na spacing nke ike n'ígwé bụ 6mil, na interlayer bụ FR4 ihe onwunwe, otú ahụ ka Ẹkot capacitance kwa square nke anụ ọhịa nke ike oyi akwa bụ ihe 75pF. O doro anya na, na obere larịị oghere, ka ibu ikike.
Enweghị ọtụtụ ngwaọrụ nwere oge ịrị elu nke 100-300ps, mana dịka ọkwa mmepe nke ugbu a nke IC, ngwaọrụ ndị nwere ịrị elu n'oge dị na 100-300ps ga-anọ oke elu. N'ihi na sekit na 100 na 300 PS ịrị elu ugboro, 3 mil oyi akwa spacing bụ agaghịkwa na ọdabara n'ihi na ọtụtụ ngwa. N'oge ahụ, ọ dị mkpa ịnakwere teknụzụ delamination na splayer spacing erughị 1mil, ma dochie FR4 dielectric material with the material with high dielectricgular. Ugbu a, ceramik na plastik nwere ike mejupụta ihe ndị chọrọ chọrọ nke 100 ruo 300ps bilitere oge ịgbago.
Ọ bụ ezie na enwere ike iji ihe ọhụụ na ụzọ ọhụụ mee n'ọdịnihu, usoro 1 ruo 3 ns ịrị oge, 3 na 6 mil spacing layer, yana ihe FR4 dielectric na-abụkarị iji aka ha mee ihe nkwekọ dị elu ma mee ka akara dị ala dị ala, nke ahụ bụ , ọnọdụ EMI na-agbanwekarị nwere ike belata oke ala. N'akwụkwọ a, e nyere ihe atụ nhazi nke PCB na-akwado ya, a na-echekwa oghere oyi akwa na 3 ruo 6 mil.
Site n’ichegharị mgbama, ezi usoro kwesiri ịgbanye akara mgbaama niile n’otu ma ọ bụ karịa, nke dịdebere ike ma ọ bụ ụgbọ elu ala. Maka ịnye ọkụ, atụmatụ dị mma kwesịrị ịbụ na okpoko ike dị n'akụkụ ala ụgbọelu, na anya n'etiti ike oyibo na ala ụgbọ elu kwesịrị ịdị obere ka enwere ike, nke ahụ bụ ihe anyị na-akpọ atụmatụ “layering”.
Kedu ụdị usoro nchịkọta nwere ike inyere aka gbochie ma gbochie EMI? Ihe ndị a na-esote usoro ịkwadoro na-eche na ike ọkọnọ dị ugbu a na otu oyi akwa na otu voltaji ma ọ bụ ọtụtụ voltages na-ekesa n'akụkụ dị iche iche nke otu akwa ahụ. A ga-atụle ikpe nke ọtụtụ ngwugwu ike mgbe e mesịrị.
Enwere nsogbu ụfọdụ nwere ike ịchepụta 4-plen laminates. Nke mbụ, ọbụlagodi ma ọ bụrụ na oyi akwa mgbaàmà dị na oyi akwa na ike na ụgbọ elu ala dị na oyi akwa dị n'ime, ebe dị n'agbata oyi akwa ike na ala ụgbọelu ka buru oke ibu.
Ọ bụrụ na ọnụahịa achọrọ bụ nke mbụ, a ga-atụle ụzọ abụọ ndị ọzọ na-aga na bọọdụ 4-ply. Ha abuo nwere ike meziwanye ihe ngbanye EMI, ma ha di nma maka ikpe ebe oke nke ihe mejuputara na bọọdụ di ala ma enwe ebe zuru ezu gburugburu ihe mejuputara (itinye mkpuchi ọla kọpa achọrọ maka ịnye ike).
Nke mbụ bụ atụmatụ a họọrọ. Igwe elu dị na mpụta nke etiti bụ akwa abụọ, etiti abụọ na-abụ etiti bụ sigịnalụ / ike ọkụ. A na - eji eriri dị obosara na - eweta ike ọkpụrụkpụ na mgbaama ahụ, nke a na - eme ka ụzọ nke ike ọkọnọ dị ala ma na - egbochi ụzọ microstrip dị ala. Site n'echiche nke njikwa EMI, nke a bụ ihe PCB 4-layer kachasị mma dị. Na atụmatụ nke abụọ, akwa oyi akwa na-ebu ike na ala, na etiti nke abụọ na-eburu mgbaàmà ahụ. E jiri ya tụnyere bọọdụ ọdịnala 4, ọdịmma nke atụmatụ a pere mpe, na implayer impedance adịghị mma dị ka nke ọdịnala 4-oyi akwa.
Ọ bụrụ na a ga-achịkwa mkpịsị njikọ ahụ, atụmatụ a dị n'elu ga-akpachapụ anya idobe njikọ ahụ n'okpuru agwaetiti ọla kọpa nke ike ma wụnye ala. Na mgbakwunye, agwaetiti ọla kọpa dị na ntinye ike ma ọ bụ stratum kwesịrị ijikọ ọnụ dịka o kwere mee iji hụ na njikọta dị n'etiti DC na obere oge.
Ọ bụrụ njupụta nke ihe ndị dị na bọọdụ 4-ahụ buru ibu, efere 6-ahụ ka mma. Agbanyeghị, nsonaazụ nchebe nke atụmatụ ụfọdụ na nhazi nke osisi 6-6 adịghị mma, yana mgbama dị mkpụmkpụ nke bọs ike adịghị ebelata. A kọwara ihe atụ abụọ n'okpuru.
N'okwu nke mbụ, a na-etinye ike ọkpụrụkpụ na ala na ọkwa nke abụọ na nke ise n'otu n'otu. N'ihi oke impedance nke ọla kọpa nwere ike ịnye ọkụ, ọ bụ ihe na-adịghị mma ma ọ bụ njikwa njikwa ọnọdụ EMI. Agbanyeghị, site na echiche nke njikwa impedance, usoro a dị ezi.
Na ihe atụ nke abụọ, a na-etinye ike ọkụ na ala na ọkwa nke atọ na nke anọ n'otu n'otu. Ihe a haziri rụpụtara nsogbu nsogbu ọla kọpa nwere. N'ihi arụmọrụ nchekwa nchekwa nke oyi akwa 1 na oyi akwa 6, ọnọdụ EMI dị iche na-abawanye. Ọ bụrụ na ọnụọgụ nke akara akara dị na elu abụọ ahụ dịkarịsịrị ntakịrị ma ogologo nke ahịrị dị mkpụmkpụ (ihe na-erughị 1/20 nke ịgbado ọkụ kachasị nke mgbaama ahụ), imewe nwere ike idozi nsogbu nke EMI iche mode. Nsonaazụ na-egosi na iwepụ ụdị ọnọdụ EMI dị iche iche dị mma nke ukwuu mgbe ejiri ọla kọpa jupụta oyi akwa na ebe a na-agbanye ọla kọpa (oge ọ bụla nke 1/20). Dịka e kwuru n'elu, a ga-atọba ọla kọpa